Onodi nke Apple Store na-abawanye maka ụmụ akwụkwọ na-eto eto | Esi m mac
Onodi nke Apple Store na-abawanye maka ụmụ akwụkwọ ndị na-eto eto
Otu n'ime atụmatụ nke Apple rụrụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya gụnyere ụmụ na ndị na-eto eto n'ime nnukwu ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Otu n'ime ọrụ ndị nwere ọdịnihu ga-abụ onye mmemme ngwa. N'ezie, Apple esetịpụwo ihe nlereanya maka ndị mmemme na n'ọtụtụ ọnọdụ anaghị agafe afọ iri na anọ.
Ndị nwere obi ụtọ ibi nso Apple Store, ga-amata ihe ọmụmụ Apple na-ewere na isiokwu dị iche iche: MacOS, iCloud, na ngwa dịka iMovie, maka obere otu ebe enwere ihe ọhụụ ọhụụ.
Mana ihe niile nwere mmalite, maka nke a, ha ga-abụrịrị ezigbo ngwaọrụ nke Mac. amalitela ogbako na egwuregwu maka nke ntà, ma ya mere emegharịrị maka mkpa ha, ebe ojiji nwa akwụkwọ dị iche na nke onye mmebe ma ọ bụ onye editọ vidiyo.
Ingnweta ha dị mfe dị ka ịpị njikọ dị na paragraf gara aga ma chọọ Storelọ Ahịa Apple nke kachasị mma. Site n'ebe ahụ, ndọpụta na-egosi na onyinye niile maka ụlọ ahịa a na-ekwu ma site na ịpị otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, ndepụta ndọpụta na ogbako ndị dịnụ ga-emeghe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị zụtara Mac mbụ anyị ma ọ bụ chọọ ịmịkwu arụ ọrụ na ya, anyị ga-ahọrọ ogbako ahụ "Mac Basics" ebe anyị ga-amụta ịnyagharịa, hazie ma rụọ ọtụtụ ọrụ site na enyemaka nke Siri. Mana ị nwere ike ịbụ onye ọrụ yana ọkwa ụfọdụ, mgbe ahụ "Mac Advanced Akụkụ" ọ nwere ike ịbụ usoro gị, ebe ị ga-amụta jikwaa faịlụ na ọtụtụ aghụghọ.
Mgbe ị matara ọrụ ndị kachasị mkpa, oge eruola ka ị bụrụ ọkachamara na ngwa ahụ. Ya mere eN'ime otu nkuzi Apple Store ndị a, anyị nwere ike ịmụ omimi n'ụzọ esi eji ngwa nke Apple akwukwo na ihe ngosi.
Ndụmọdụ ikpeazụ: Mee ọsọ ọsọ n'ihi na ọ bụ ezie na onyinye dị ukwuu, ihe ọmụmụ ahụ na-efe, ị ga-ewe otu elekere maka ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Onodi nke Apple Store na-abawanye maka ụmụ akwụkwọ ndị na-eto eto
DaisyDisk, dị na mbelata 50%
Ihe ngbanwe MP4 na oyiri Foto Fixer Pro, n'efu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu maka obere oge